December 2013 - पेटबोली ...!
Monthly Archive:: December 2013	Sort Posts by:
‘एउटा कुरा थाहा छ? हाम्रा बा र दाजु कटारी जाने रे आज।’ गाग्री धारामा थापेपछि मजेत्रोले मुख पुछ्दै निर्मलीले भनी। उसको अनुहार खुशीले फक्रियो। मजेत्रो फनक्क घुमाई र थपी, ‘भरेदेखि त गोठमा म बस्छु। आमा बिरामी छिन्।’ गोलो चटक्क मिलेको गहुँगोरो अनुहार। निलो फ्रक र खैरो बुट्टे	Tweet
काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातमा हिँड्नेहरू सबैका आफ्ना कथा छन्, आफ्नै व्यथा छन्। आफ्नै सवारी हुनेका पनि होलान् कथा त। तर आफूलाई त्यसको अनुभव छैन क्यारे ! जे भएपनि आफ्नै सवारी हुनेलाई सार्वजनिक सवारी चढनेहरूलाईभन्दा सुखै हुन्छ। आफ्नो सवारी हुनेको तेल खर्चभन्दा सार्वजनिक सवारी चढनेको कम खर्च हुन्छ भन्ने	सामाजिक सन्जाल	अनन्त कोइराला